Ny vokatra bee | Tantsaha anaty aterneto | December 2019
Sokajy Ny vokatra bee
Ahoana no fomba hihazonana ny toetra manasitrana ny jelly mpanjaka
Ao amin'ny beekeeping, ny jelly mpanjaka dia heverina ho vokatra mahavariana sy manan-danja indrindra. Misaotra an'io elixir mahagaga io, afaka mamelona ny taranany sy ny mpanjakavaviny ny tantely, izay mameno ny fitrandrahana amin'ny mponina vaovao. Andeha hojerentsika ny fomba hitahirizana ny jelly. Fantatrao ve? Ny jelly Royal dia mamono mpitsabo biby.
Amin'ny tranga mety haka ny jelly-mpanjaka, torolàlana ampiasaina sy doka
Maro no naheno matetika momba ny vokatra voajanahary tsy manam-paharoa tahaka ny mpanjaka jelly. Ary ity vokatra ity dia fantatra amin'ny anarana hafa - "jelly mpanjaka". Ny jelly roapolon'ny mpanjaka - inona izany? Io tsiambaratelo io dia tsiambaratelo notsidihan'ireo andian-tantaran'ireo mpiasan'ny labiera miaina ao anaty rambony. Izy io dia novokarin'ny bibikely 5-15 andro.
Ahoana ny fanangonana ny poizina, ny fampiasana vokatra bee
Ny tsiranoka Bee dia matetika ampiasaina ho fanafody tena mahomby. Marina fa ilaina ny manangom-bokatra tsara sy mampiasa ny tsimok'aretina, satria, raha tsy manadio ny vatana, dia mety hanapo azy io. Eto ambany eto dia miresaka momba ny tombontsoa avy amin'ny vavom-bitsika sy ny fomba fampiasana azy. Inona no asehon'ny tovovavy bee? Raha toa ianao ka tsy dia afaka mahita ny poizina ianao, raha manangom-boka izany, satria manomboka eo ambany hoditra amin'ny ampahany kely izany - 0,-0-0,8 mg
Karazan-tsakafo, fampiasan'ny olombelona
Amin'ity lohahevitra ity dia hiresaka momba ny vokatra bee isika, izay ampiasain'ny olona any amin'ny indostria isan-karazany. Hilaza aminareo izahay hoe inona ny merva dia ao anaty voaloboka, inona ny maha-zava-dehibe ny vavom-bitsika sy ny ronono dronono, ary koa milaza aminao izay fananana bakterizidana. Fantatrao ve? Ny tantely dia karazana fanenitra manokana.
Rahoviana ary ahoana no fomba handraisanao tsangambato Mpanjaka
Mahafantatra ny tombotsoan'ny vokatra be dia be ny olona, ​​toy ny tantely sy propolis. Misy koa ny vokatra novokarin'ny tantely ho toy ny jelly mpanjaka. Izany dia vokatra fanasitranana ampiasaina amin'ny fanafody sy ny cosmetology. Ny tantely dia mamokatra izany mba hanomezana sakafo ny tranon-jaza sy ny zana-boanjo. Ny lanjan'ny volokano mahazatra mahazatra dia mahazo ronono mpanjaka mandritra ny 3 andro voalohany amin'ny fiainany, izay 60-80 andro.
Tena mahasoa ny tantely kionkano, ny herin'ny siantifika cilantro
Ny Coriander (lat. - Coriandrum) dia ivon-kazo etromaslennoe isan-taona ao amin'ny fianakaviana elo. Olona maro no mahalala mahafantatra ny voay noho ny voany, izay ampiasaina ho tsikitsiky aromatika, na noho ny tselatra sy ny raviny, izay antsoina hoe cilantro (quinda) ary ampiasaina ho zavamaniry maina. Ny mahazatra dia mahavariana toy ny zavamaniry misy tantely, manome tantely tsara sy mahasalama.
Nahoana ny tantely ara-pihaviana no mahasoa?
Sarotra ny maminavina ny vokatra ara-tsakafo ilaina sy matsiro kokoa noho ny tantely. Misy karazany maro karazana tantely, izay samy manana ny endriny manokana. Na izany aza, ny karazana sasantsasany izay tena sarobidy indrindra amin'ny fitsaboana sy ny fitsaboana nentim-paharazana dia manana firafitra manasitrana indrindra. Izany no tena tantely amin'ny phacelia.
Inona no atao hoe vovobonin'ny zavamaniry, ny zava-mahadomelina sy ny fanoherana ny vokatra?
Ny vokatra bee be dia be no ampiasain'ny olona hatramin'izao. Ny tantely sy ny savoka indrindra no tena mahazatra azy rehetra. Na dia izany aza, tsy ny rehetra no mahafantatra fa misy vokatra mitovy amin'ny ampolony amin'ny antsalany, izay nahitana ny fampiharana azy amin'ny indostria isan-karazany. Noho izany, androany isika dia hiresaka momba ny vovobon-tsakafo, ny fomba ilaina, ary ny fomba azo ampiasaina amin'ny fiainana andavanandro.
Fananana karazan-tsakafo, fampiasana sy fanoherana
Na dia eo aza ny fakom-panavotana dia ny fahavalon'ny lehiben'ny mpamboly, ary indraindray dia manimba ny rantsana rehetra, amin'ny fanafody ny volombava, dia ity lanjan'ny bibikely ity dia fitaovana hiadiana amin'ny raboka sy ny tsy fahampian-tsakafo. Ireto ambany ireto ny fomba fijerintsika akaiky ireo toetra mampiavaka ny fitsaboana amin'ny tincture katsaka. Tavoahangy papango fanosotra: famaritana Ny karazan-tsakafo, na karazana bozaka, no karazana bibikely mampidi-doza indrindra, satria ao amin'ireo no mametraka ny atody.
Linden tantely: famaritana, fanangonana, tombony ary fahasimbana
Ao amin'ny fomba fitsaboana medikaly nentim-paharazana mampiasa tantely, matetika ny laisoa no voatonona. Maro no efa nanandrana izany, fa tsy ny rehetra no mahafantatra ny maha-tokana ny vokatra bee. Noho ny fofona malefaka, fotsy tsara tarehy miaraka amin'ny loko mavo sy tsiro tsy manam-pahaizana, ny tonelina lava dia heverina ho sarobidy indrindra amin'ireo karazana tantely voajanahary.
Ny fampiasana balsama amin'ny fitsaboana nentim-paharazana sy ny cosmetology: ny soa sy ny loza
Ny famokarana dia manome ny olona tsy vitan'ny tantely ihany, fa koa miaraka amin'ny singa miavaka toy ny savoka. Nanihany ireo mpahay siansa fa izy no lasibatra voalohany noforonin'ny zavamananaina. Na dia tamin'ny andro fahiny aza, dia rakotra ratra izy ireo, ary ireo maherifon'ireo angano Grika fahiny dia tena nahafantatra tsara an'io zava-mahatalanjona mahavelona io. Noho izany, Odysseus dia nampiasa izany fa tsy mpanaingo baolina ho an'ny ekipany mba hamonjy azy tsy hihira ny sirèn, ary i Daedalus dia namorona elatra ho azy tamin'ny Icarus.
Ny fomba tsara indrindra hijerena tantely ho an'ny natiora
Ny tantely dia vokatra manan-danja ary ampiasaina amin'ny tsy fahampian-tsakafo, fa koa amin'ny fanafody sy ny cosmetology. Mba hahatonga ny voka-dratsiny ho tsara ho an'ny vatana dia tokony handinika tsara ny fotoana hividianana azy. Ahoana no hanamarinana ny hatsaran'ny tantely? Ny valiny amin'ity fanontaniana ity dia tsotra. Ny valiny marina indrindra dia hanome fanazavana momba ny laboratoara.
Fomba entina manala vovobony volom-borona, fananana mahasoa sy fanoherana ny vokatra
Iray amin'ireo vokatra miavaka sy tena mahasoa ny beekeeping, izay volavolan-tsakafo miorina amin'ny vovobony dia vovoboka bee. Ny tombotsoan'ny vokatra amin'ny fitsaboana nentim-paharazana dia fantatra nandritra ny taonjato maro. Eritrereto hoe inona ny perga bee, inona ny toetra mahasoa ananan'izy io ary ahoana no tokony handraisana azy tsara.
Ny famokarana solarmo-it-yourself: dingana isan-karazany
Ny mpihinam-pahaizana rehetra dia manaiky fa: tsy mitombo ny savoka. Noho izany, raha aorian'ny vanim-potoana tsara dia manana kilao misy tantely vaovao ianao - aza mieritreritra ny manangona azy ireo ao anaty boaty aoriana. Amin'ity lahatsoratra ity dia hianatra ny fomba handraisanao tombontsoa avy amin'ny fitsangatsanganana an-dabozia tsy misy ilana azy ary hanao ny fanavaozana ny fanadiovana solona ilaina.
Fanadiovana rongony: ahoana ny fampiharana amin'ny famokarana
Mpitsikaroka maro no manontany tena hoe ahoana no fomba hamonoana ny savoka amin'ny fotoana sy vola faran'izay kely indrindra. Mandritra izany fotoana izany, ny fialana amin'ny fikarohana ny vaovao momba ny rafitra isan-karazany dia tsy mahazo ny vokatra tadiavina. Izany no antony tokony handinihana bebe kokoa ity olana ity. Ny endri-javatra amin'ny fampiasana ny fitaovana ampiasaina amin'ny famokarana herinaratra Wax - iray amin'ireo fitaovana izay manamora ny asa ao amin'ny rongony.
Ahoana ny handrafetana ny vongana ao an-trano: resipe
Ny ankamaroantsika dia mihevitra fa vodka fotsiny ny fisotroana zava-pisotro, izay ampiarahina tantely. Saingy diso izany hevitra izany. Raha ny marina, ny fanomanana ny fomba fisotroana dia ny famoahana sy tantely ny tantely, ary ao anatin'ny endrika madio dia tsy mihoatra ny 16% ny votoatin'ny toaka.
Chestnut tantely: inona no ilaina, fiaraha-mikorana sy ny fanoherana
Ny tantely dia misy karazany tsy fahita firy. Na izany aza, mendrika ny homena voninahitra izy noho ny fananany tombontsoa manokana. Ny vokatra fanasitranana tena izy dia manana fiantraikany tsara eo amin'ny vatan'olombelona, ​​ary manana ny toetrany miavaka ny firafetany.
Inona no atao hoe zabrus ao anaty akanjobe sy ny fomba tokony hitondrany azy
Hatramin'ny fahiny, ny olona dia mampiasa vokatra bee ho an'ny zavatra ilainy. Ny tantely sy ny derivatives maro avy aminy dia ampiasaina amin'ny sakafo, ampiasaina mba hanehoana sy hisorohana ny hatsiaka. Iray amin'ireo vokatra tena ilaina sy miavaka omen'ny natiora sy ny tantely ny tantely ny zabrus. Amin'ity lahatsoratra ity dia hitantara momba io fanomezana miavaka amin'ny natiora io sy ny fomba ampiharana tsara ny zabrus.
Nahoana ny tantely no antsoina hoe vokatra vavy?
Ny tantely dia mirakitra sakafo mahavelona maromaro, izay vitsy dia vitsy no mahalala. Izany dia vokatry ny tsy fahampian'ny vokatra amin'ny karazana azy ary misy karazany mahasoa maro. Amin'ity lahatsoratra ity dia hiteny amin'ny an-tsipiriany momba ny tantely tantely ianao: inona izany ary ahoana no mahasoa. Kitapo sy fisehoan-javatra Tsy dia fahita firy io vokatra entin-drivotra io.
Inona no atao hoe tantely fotsy?
Tsy ireo mpihira tantely rehetra no mahafantatra fa misy dikan-teny fotsy amin'ity vokatra manan-danja ity, izay misy ny fahasamihafana manokana ananan'izy ireo, izay horesahantsika ato amin'ity lahatsoratra ity, hahitana hoe ohatrinona ny tantely fotsy ary inona no atao azy, ary manampy koa ny manavaka ny sandoka amin'ny vokatra tena izy. Kitapo sy fisehoana Raha miresaka momba ny vokatra vita amin'ny voambolana tsy misy pentina tsy misy pensilihazo sy fanampiny, dia hanana loko maitso maitso izy io, satria tsy azo atao ny manery ny tantely hanangona afa-tsy ireo zavamaniry izay mifanandrify indrindra.
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Ny vokatra bee